Abaduni Bezamile Ukwephula I-Bitcoin Wallet Ebiza u- $ 750 Million Kepha Nakhu Okubanjwayo | ICoinGenius Host Host Virtual Crypto Umcimbi
Isikhwama se-bitcoin esiqukethe okungaphezulu kancane kwe-69,000 BTC senza imijikelezo yokugenca imiphakathi kuyo yonke i-inthanethi. Isizathu? Kusobala.
Wonke umuntu (funda abaduni abanolwazi nabazibiza ngama-wallet crackers) abazimisele ukugqashula bakuthathe konke. Noma okungenani, ucezu lukaphayi ocishe ube yizigidi ezingama- $ 750. Eminyakeni emibili edlule, noma kunjalo, akekho noyedwa owakwazi 'ukuyishaya ngenhlanhla.'
Abaduni Bazama Ukuqhekeka I-Wallet Yesikhombisa Enkulu Kunazo Zonke Emhlabeni
Ngokusho kochwepheshe bezokuphepha ku-inthanethi u-Alon Gal, ohamba ngesibambo i-UnderTheBreach ku-Twitter, abaduni bebezama ukuvula isikhwama semali se-bitcoin esiphethe cishe i-BTC eyi- $ 720 million (kubhekwa amanani anamuhla). Kodwa-ke, uGal ubike ukuthi akekho umuntu othumele impumelelo maqondana nokufanayo.
Thola lokhu - kunesikhwama seBitcoin esine-69,000 Bitcoins ($ 693,207,618) esidluliswa phakathi kwabahlaseli / abaqaphi eminyakeni emibili edlule ngenhloso yokuqhekeza iphasiwedi, akukho mpumelelo kuze kube manje.
Ngiphethe isikhwama semali, @Google ngicela ungixhumanise nekhompyutha ye-quantum. pic.twitter.com/GcIqH7kN98
- U-Alon Gal (Ngaphansi Kwesikhala) (@UnderTheBreach) September 8, 2020
Njengoba kwenzeka kanjalo, isikhwama se-bitcoin engxoxweni sine- I-7th ngobukhulu be-BTC stash emhlabeni.
Manje Isitholakala Ku-inthanethi Ukuze Wonke Umuntu Azame
Ngenkathi abanye abantu bezamile ukuzigqekeza, iningi labo livuma ukwehluleka likhangise isikhwama semali kumaforamu wokugenca online ukuze omunye umuntu enze lo msebenzi.
U-Alon ukuvezele lokhu Vice engxoxweni yomuntu ngamunye maqondana nodaba:
Ukweba izikhwama zeBitcoin ezivela kuzisulu emhlabeni jikelele kuyinjongo ejwayelekile phakathi kwabaphula umthetho nge-cyber. Izikhwama zemali zivame ukuvikelwa ngamaphasiwedi aqinile futhi uma kwenzeka ukuthi i-cybercriminal ikwazi ukuthola isikhwama semali futhi ingakwazi ukuqhekeza iphasiwedi ingayithengisa kubaqashi be-hash abangosomabhizinisi abangabantu abanamandla amakhulu we-GPU
UGal uqaphele esinye sezikhangiso ezinkundleni zokugenca ezidumile iRaidForums. Futhi hhayi nje izingosi zokugenca, isikhwama savela ku-BitcoinTalk ngoJuni 29 nyakenye. Ngemuva kwalokho, ku-All Private Keys bese kuba yi-Wallet-dat (dot) net.
Kepha Iqukethe I-69,370 BTC Noma?
Isikhwama se-bitcoin sibonakala njenge-nut enzima yokuqhekeka. Kepha umbuzo obalulekile okufanele uwubuze uwukuthi - Ingabe unayo iBTC? Yize inekheli le-alphanumeric, kungenzeka ukuthi ifayili le-'wallet.dat '' lifakiwe. ' Kukhona ukhiye osesidlangalaleni otholakalayo kodwa hhayi ukhiye oyimfihlo.
Umsunguli weWallet Recovery Services, uDave Bitcoin, uthe:
Kungenzeka udokotela wefayela le-Bitcoin wallet.dat ukwenza kubonakale sengathi liqukethe ibhalansi ephezulu. Ifayela lesikhwama liqukethe ngazimbili zokhiye womphakathi nokhiye oyimfihlo obetheliwe wamakheli alilawulayo. Ngakho-ke umuntu angashintsha ifayili kusihleli kanambambili futhi aguqule ukhiye osesidlangalaleni welinye lamabhangqa ekheli aye kwelikheli lenani eliphezulu le-BTC.
Kungaba isicupho sokukhohlisa abantu ekwenzeni izinkokhelo ze-bitcoin ngokudutshulwa kwesikhwama esingenayo i-BTC empeleni.
Kungenzeka Ukugqekeza kungenzeki
Ngokusho komunye umbono, ukuqhekeka kuvuleke lesi sikhwama se-bitcoin kungenzeka kungenzeki ngokuphelele. Kodwa kungani?
Kungenzeka, isikhwama semali sivikelwe yisikhathi eside, esiyingqayizivele, futhi okunzima ukuqhekeza iphasiwedi. Ngaphandle kwalokhu, ifayela lewallet.dat lingabethelwa kusetshenziswa inhlanganisela ye-AES-256-CBC ne-SHA-512 algorithm. Lokhu kuhamba kancane ukucubungula, okwenza kube nzima kakhulu ukuthi 'amandla okuhlukumeza' avulwe.
ISINIKIZO ESIKHETHEKILE (Sixhasiwe) I-Binance futures 50 USDT Voucher EMAHALA: Sebenzisa lesi sixhumanisi ukubhalisa futhi uthole ama-10% emali ekhokhwayo kanye ne-50 USDT lapho uhweba i-500 USDT (kunqunyelwe - ukubhalisa okungu-200 kokuqala kukhethekile ku-CryptoPotato)
Izihloko ezihlobene:$ 750ikheliAmakheliBitcoinbitcoin isikhwamaBitcoin AmalletBitcointalkI-BitmexblockchainBTCushintshoUkuphepha kwe-cyberDaveumcimbiOkukhethekileIzimaliikusasakubaduninokugencaUkubambainternetUJobeJULANIONEIzinkokheloIsizathuImisebenzishareUxhasiweUkuhwebaTwitterUSDTisikhwamawalletsWHOUmhlaba
Yini i-Ethereum? Umhlahlandlela we-ETH WOKUSETSHENZISWA KOKUGCINA
UKraken uba yinkampani yokuqala ye-crypto ukuba yibhange e-USA - umbiko kaSaumil Kohli.
UMichael Novogratz: I-Bitcoin ingeyawo wonke umuntu futhi kufanele ube no-2-3% weNet Worth yakho Kuyo
Ozakwethu Kwezimali Ne-DeFi Protocol Cream
Phakathi kwezinjabulo ze-BTC ezishaya phezulu kakhulu, iBitcoin bull kanye nomphathi wesikhwama sangaphambili se-hedge fund uMike Novogratz uthe, engxoxweni ne-Yahoo Finance, ukuthi iBitcoin yenzelwe wonke umtshalizimali.
"I-Bitcoin ingeyawo wonke umuntu," yena wathi, enezela ukuthi "Wonke umuntu kufanele abeke u-2% kuya ku-3% wenani lawo lonke ku-bitcoin futhi alibheke eminyakeni emihlanu, futhi kuzoba ngaphezulu kakhulu."
UNovogratz naye ubenguzakwethu eGoldman Sachs futhi owayengumphathi weFortress Investment Group. Ngo-2012, inani likaNovogratz lalingama- $ 500 million. Ku-2017, waveza ukuthi i-20% yenani lakhe eliphelele ligcinwe eBitcoin nase-Ethereum, lapho akhiqiza khona imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 250.
Ukubikezela kukaNovogratz $ 20k Kuyagcwaliseka?
Umphathi we-Galaxy Digital uthanda ukubikezela intengo ye-bitcoin. Ngisho nangemva kokuphahlazeka kuka-Mashi, lapho i-bitcoin ithengiswa ngemali ephansi minyaka yonke engama- $ 3,500, wayesenamandla kwi-cryptocurrency.
He kwabikezelwa ngo-Ephreli leyo bitcoin izoshaya u- $ 20,000 ngaphambi kokuphela kuka-2020 nokuthi angayidonsela phansi i-cryptocurrency uma ukubikezela kwakhe kungagcwaliseki.
Ngokuhweba nge-cryptocurrency okungaphansi kuka-7% kude nentengo engu-2017 yesikhathi sonke ephezulu ka- $ 20,000, kungahle kungabi isikhathi eside ngaphambi kokuthi ihlasele i-ATH entsha.
I-Bitcoin Ngeke Ithengise Ngezansi kwe- $ 12,000
Njengoba iBitcoin isondela entengo yokwephula amarekhodi, abanye abaqageli bakholelwa ukuthi i-cryptocurrency ingabona ukulungiswa maduze. Kodwa-ke, uNovogratz ukholelwa ukuthi le mpahla ngeke ihwebe ngaphansi kwama- $ 12,000 kule nkambiso ye-bullish.
“Njengamanje, sisondela ku-20,000 14, njengezindawo eziphakeme zakudala. Akuvamile ukuthi ukuhweba emakethe kufike ezindaweni eziphakeme zakudala futhi kudlule kuwo, akunjalo? Yizimakethe nje ezivame ukuthinta izindawo eziphakeme zakudala, baziqede amandla, balungise kancane, bese bekhipha okuphezulu. Futhi ngakho-ke kukhona ukwesekwa okukhulu okuzungeze i-15,000 nohhafu, i-19,000. Ngakho-ke lalela - u-15,000 kuya ku-19 angazizwa ebuhlungu impela uma nje ungathenga lapha eneminyaka engu-12,000. Angicabangi ukuthi sizophinde sehle sibe ngaphansi kuka-XNUMX kulesi siqephu, ”kusho yena.
Abatshalizimali Bezikhungo Bacindezela Inani Le-Bitcoin
Inkunzi yeBitcoin iphinde yasho ukuthi i-rally yamanje iqhutshwa ngabantu ababiza kakhulu, ama-hedge funds, kanye nezikhungo zangempela. Ucabanga ukuthi ukubamba iqhaza kwalaba badlali abakhulu, kanye nomthetho owandisiwe, kufanele kuthuthukise ukungazinzi okuthile.
Hhayi bona kuphela kodwa nomlingisi we- "Game of Thrones" UMaisie Williams naye ungene lapho enza inhlolovo yeTwitter ngesonto eledlule ebuza ukuthi kufanele ayilangazelele yini iBitcoin, uMike Novogratz aphendule kuyo wathi, “Duh!”.
I-rally yamanje yeBitcoin ithule kakhulu kunaleyo yokugcina. Ukusesha kweGoogle ye- "Bitcoin" ifike kuvuthondaba ngasekupheleni kuka-2017. Manje sezisebenza cishe kokukodwa kokuhlanu kwalelo zinga. Kepha uNovogratz uthe ubufakazi obusekela amanani entengo we-bitcoin bungcono kunakuqala.